Wholesale Enteral kudyisa seti Mugadziri uye Mutengesi | LINGZE
Kupinda kwekudya Sets
Bhegi rinokwevera pasi
Chiremba Medical PVC, DEHP-Yemahara, Latex-Yemahara
Chena isina kurongedza
Rigid neck kuti ive nyore kuzadza uye kubata, Yakasiyana gadziriso yesarudzo
√ Yedu inoraswa yekudya yekudyira seti ine ina marudzi mana akasiyana ezvekugadzirira kugadzirira: bhegi pombi seti, bhegi giravhiti seti, spike pombi seti uye spike giravhiti seti.
√ Kana gadziriro yezvikafu zvinoiswa muhombodo kana poda yakakanyiwa, mabhegi seti achasarudzwa. Kana akaiswa muhombodo / akabhegi akajairwa emvura kugadzirira kwekuvaka, spike seti ichasarudzwa.
√ Pump seti inogona kushandiswa mune akawanda akasiyana mabhureki eEnteral yekudyisa pombi.
Chikonzero kuongorora uye kurapwa kwekuvharwa kweiyo enteral yekudyisa chubhu
Kudya kwemukati ndeimwe yenzira dzekupa muviri wemunhu zvinovaka muviri kuburikidza nemudumbu. Nzira huru dzinosanganisira chubhu yekudyisa uye yemuromo manejimendi. Tube yekudyisa inowanzo sanganisira nasogastric / ura chubhu, percutaneous endoscopic gastrostomy, jejunostomy chubhu uye Percutaneous endoscopic jejunostomy, nezvimwewo Kudya kwemukati kunoenderana nemamiriro emuviri wemurwere, kuvimbika kwetumbo kunochengetwa, uko kunogona kudzivirira kutapukira kwemukati webhakitiriya uye kuderedza mukana wehutachiona. Iyi nzira yekuvhiya iri nyore kuongorora, yakachengeteka uye ine hupfumi, uye inowanikwa mukiriniki tsika. Inoshandiswa zvakanyanya, asi mukuita kwekudyisa chubhu, inokanganiswa nezvakasiyana zvinhu, inowanzoitika kumatambudziko ekuvhara chubhu, uyezve kubuda kwezviitiko zvisina kurongwa zvekudzora.
Sekureva kwenyanzvi, zvikonzero zvekuvhara chubhu yekudya mune yakajairwa colon ndeinotevera:
1. Tube zvine hukama
Kukundikana kunyatsogadzirisa iyo catheter mushure mekutendeuka, zvichikonzera iro rakafumurwa chikamu kumonyanisa uye kupeta; kugara uchikosora, kusvotwa uye kurutsa zvinoita kuti chubhu yekudyisa ibhure mumuromo, pahuro, kana mumatumbo, zvinova zvakajairika mafekitori ekudyisa chubhu kuvharika. Muchidzidzo ichi, zvakaonekwa kuti chiyero chekuvharika cheye naso-ura chubhu chaive chakakwirira kupfuura icho cheya nasogastric chubhu, iyo yaifungidzirwa kuti ine hukama nehupamhi hupfupi hweiyo-yemukati chubhu uye hurefu hwakareba hwekugara mumuviri . Mushure mekupa chubhu yasara kwenguva yakareba, madziro emukati ehubhu anova akaomarara nekuda kwekukura kwemushonga uye mhinduro yezvinovaka muviri uye kuora kwejusi rekugaya, izvo zvinoita kuti mhinduro yehutano ive nyore kurembera pamadziro. Uye zvakare, iyo infusion inomiswa kwenguva yakareba, iyo yekumhanyisa kumhanyisa iri kunonoka, uye nzira yemudumbu inoburitsa ropa mushure mekuvhiya, izvo zvinoita kuti ropa rivhare pombi.
2. Nutrient solution chinhu
Iko kusunganidzwa kweiyo solution yemushonga kwakanyanya, iyo yekumhanyisa kumhanya inononoka, mhinduro yezvinovaka ine cellulose uye zvimwe zvinhu zvinoita kuti mhinduro yehutano ive nyore kunamatira kumadziro emukati memwenje, iyo inoderedza mwenje uye inowedzera mukana wechiedza blockage. Zvidzidzo zvakaratidza kuti mwero weiyo solution solution inokwenenzverwa haina zvazvinoita pazviitiko zvekuvhara chubhu, asi zvakawanikwa kukiriniki kuti kana hita ichishandiswa kudziisa mhinduro yemuviri, kana iyo kasira ichinonoka, mhinduro yemanyowa yakanyanyisa kupisa uye yakashongedzwa kuita chigadziko. Bvisa pombi. Uye zvakare, panguva yepakati yekudya kwekudya, mhinduro yemutumbi iri mudumbu inogona kuvhara chubhu yezvekudya nekuda kweflux nekuda kwekukosora kwakanyanya, kuhotsira, kurutsa uye zvimwe zvikonzero.
3. Mukoti chinhu
Chikonzero chikuru chekuvhara chubhu yekudya ndeyekuti mukoti haaite kumhanya zvine mutsindo zvichienderana nezvinotaurwa, kana nzira yekutsvaira haina kunaka. Munguva yekuvhiya, vashandi vekoti vanga vasina ruzivo rwakakosha rwekunaka kwekudya. Munguva yekutsvaira, vaisakwanisa kuita mashandiro akasiyana siyana zvinoenderana nemirau, uye nguva yekutsva yaisakwanisa kudzorwa zvine musoro. Iyo acidity uye alkalinity yejekiseni yaive yakasiyana. Kana iyo mishonga ikasarapwa zvakasiyana, iyo pombi ichavharwa. Kana vanamukoti vasingakwanise kuita nemazvo mashandiro akasiyana zvinoenderana nachiremba, kuwedzeredza kwese kwese kwemishonga yekudyisa chubhu kana kusatarisa kune chikafu chekupisa chekupa chubhu, kumisa zvisina kujairika panguva yekujova mhinduro yemuviri kunogona kuwedzera mukana yehubhu kuvhara. .
4. Patient zvinhu
Murwere haana ruzivo rwakakodzera rweukoti, uye haakwanise kuita wega-manejimendi uye mukoti weiyo yekudyisa chubhu panguva yakakodzera uye inoshanda nenzira. Semuenzaniso, varwere vanomisa kupomba kweiyo solution yemushonga voga nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Mukupindura kwezvikonzero zviri pamusoro pekuvhara chubhu yezvokudya, tinogona kutora matanho anotevera ekudzivirira:
Sarudza mhinduro yakakodzera yezvinovaka zvinoenderana nemamiriro emurwere
Mukuita kwekubaya jekiseni mhinduro, edza kusarudza chigadzirwa chine yakaderera kusangana. Kana iwe uchida kubaya jekiseni mhinduro ine yakanyanya kusangana, iwe unofanirwa kuisanganisa usati wabaya jekiseni. Musati washandiswa mushonga, mushonga unofanirwa kuzununguswa. Panguva yekushandisa, kana chinhu chemuviri chakatumbuka, chinofanirawo kuzununguswa. Mukuita jekiseni remushonga, haigone kusanganiswa nemimwe mishonga kudzivirira kusangana kwemakemikari kubva mukuitika, zvichikonzera kudzikira kwekugadzikana kwechinhu uye kunaya kwemanyowa .
Sarudzo inonzwisisika yeiyo enteral kudya kudyisa chubhu
Kana murwere asingakwanise kutora chikafu nemuromo, mamiriro emurwere anofanirwa kuongororwa, chimiro chemudumbu chemurwere chinofanira kuongororwa, uye pakukora kwakakodzera kwepombi kunofanirwa kusarudzwa kudzivirira kuitika kwekuvhara kwepombi. Iro zita, kureba, nezvimwewo zvekudyisa kwehubhu murwere zvinofanirwa kunyorwa, uye chubhu inofanirwa kutsiviwa munguva yekudzivirira kuti chubhu isashandiswe mushure mekukombama kwakakomba uye deformation .
Edza kushandisa enteral kudyisa pombi uye pombi inoenderana sets
Edza kushandisa enteral chikafu pombi, kumhanyisa kutonga kwakarurama, otomatiki alarm kana pombi ichivhara, iri nyore, inokurumidza, inokodzera uye inoshanda. Iko kushandiswa kwechinomira chinomiririra chinomira kuchanyatso kudzikisira kuwanda kwebasa revanamukoti uye kudzivirira akateedzana ehubhu ekuvhara njodzi senge kunonoka kufashaira uye kumonyanisa kwehubhu kunokonzerwa nekumiswa kweiyo yekudya kunovaka muviri nekuda kwekusimuka kwemubhedha pamubhedha. Maitiro acho ndeaya anotevera: gadzirisa pombi yezvakanaka pane inomira yekumisira infusion, shandisa AC simba kana murwere akarara pamubhedha, uye shuwa kuti simba rebhatiri riri kushanda zvakajairika kana uchisimuka pamubhedha .
Simbisa dzidzo yehutano yevanamukoti
Simbisa pfungwa yebasa revashandi vevanamukoti, teerera kune kudzidziswa kwehunyanzvi kwevanamukoti vadiki, uye nekuramba uchivandudza mhando yehunyanzvi uye hunyanzvi hwekuita basa. Rega vashandi vevanamukoti vave neruzivo rwemapombi anodzivirira uye vatore danho rekuongorora nguva dzose kudzivirira mutoro wezvehupfumi uye mhedzisiro yakaipa yevarwere inokonzerwa nekunonoka kurapwa . Kuitira kudzivirira zvinobudirira kuvhara kwepombi yekudyisa, musanganiswa wemuviri usati wabayiwa jekiseni, mhinduro dzakasiyana dzehutano dzinofanira kuongororwa, uye nzira dzakakodzera dzekuchengetedza pombi dzinofanirwa kutorwa kuti dzive nechokwadi chekuti pombi inoshandiswa mune yakapfava mamiriro. Pulse jekiseni inogona zvakare kushandiswa kugadzira vortex diki panguva yekutsvaira mu lumen, iyo inogona kuburitsa kunze kwezvinhu zvakasungirirwa kumadziro ehubhu munguva.
Simbisa dzidzo yehutano yevarwere
Vashandi vevanamukoti vanofanirwa kusimbisa dzidzo yehutano pakudya kunovaka muviri, vanyore marongero chaiwo ehutano, uye varege varwere nemhuri dzavo vanzwisise ruzivo rwakakodzera uye vatore chikamu. Kune varwere vasina ruzivo rwehutano, kutarisisa kwakakwana kunofanirwa kupihwa kune kwavo kwepfungwa uye kwepfungwa zvinhu. Usati waita chikafu chekupinda mukati, kukosha, kukosha uye nzira dzekumisikidza yekudya kwekudya kunofanirwa kutsanangurwa zvakadzama. Munguva yekuita kwacho, isu tinowanzo kutaurirana nevarwere kuti vanzwisise maitiro avo epfungwa uye epanyama uye nekupa rutsigiro rwepfungwa. Zvinoenderana nedanho retsika uye kugona kudzidza kwevarwere nemhuri dzavo, nzira dzakasarudzika dzinosarudzwa kuvandudza zvizere kushingairira kwevarwere nemhuri dzavo mukudzidza, zvinoenderana nekuvandudza mhando yekiriniki yekuchengetwa kwehutano.
Zvinodhaka Nasal Kudyisa
Pakubaya jekiseni mushonga, unofanirwa kunge uchinyatsopwanywa uye kupwanywa kuita hupfu, uye mushure mekunyungudika zvizere (kusefurwa ne gauze kana zvichidikanwa) inopindwa jekiseni. Shenesa lumen ne 20ml yemvura inodziya usati uye mushure mejekiseni kudzivirira mushonga uye mushonga mhinduro kubva pakuvhara mukati memwenje uye zvichikonzera kuvhara. Iwo marongero ehutongi ndeaya: mira chikafu chinogadziriswa mhinduro kudonha → kufashaira → dosing (fomu remvura) → kubhururuka zvakare → kutangazve chigadzirisamu mhinduro yekudonha. Hazvikurudzirwi kuendesa mishonga kubva kune iro-remukati chubhu. Mimwe mishonga (yakadai saLosec, inoonekwa nekiriniki kuve iri nyore kwazvo kuvhara iyo chubhu) inokurudzirwa kuti igove kuburikidza neiyo gastric chubhu.
Inosara yemhino yekudyisa mvura yakasara inowanikwa pamucheto wakafumurwa weinopinda yekupa chubhu chiratidzo chine njodzi chekuvhara iyo chubhu.
Maitiro ekutongwa kweakavharwa chubhu: Iyo yemudumbu yekudya chubhu haina kuvhurwa, chikafu hachisi nyore kupinza, uye hapana mvura inodhonzwa kumashure panguva yekudya. Kana iwe ukashandisa sirinji kudzora zvinyoronyoro bvunzo uye kuchine kuramba, kana ukabaya 20ml yemvura inodziya uye kuyerera kwacho kuchiri kusiri kutsetseka, chubhu yakavharwa .
Kune iyo catheter kuvharika kwakaitika, vedu vanamukoti vanofanirwa kushingaira kuziva chikonzero, kunzwisisa iyo yekuvhara mashini, uye sarudza yakakodzera kurapwa. Inowanzo shandiswa kiriniki yekudzora nzira dzinogona kugoverwa kuita nzira dzepanyama uye nzira dzemakemikari zvinoenderana nemisimboti yavo .
Maitiro epanyama anosanganisira kukanya pamwe neasina kumanikidza nzira yekukweva uye tungamira waya yekucheresa nzira.
(1) Rubbing plus negative pressure suction method: Kana zvikaonekwa kuti solution yemushonga yakavharwa mutubumbu rezvemuviri, zora chikamu chiri kunze kwechubhu yezvinovaka muviri, uye panguva imwechete shandisa sirinji ye20ml kupomba 10ml yemvura inodziya kumashure. Pasi pekuita kwesimba rekunze, iyo clot inonamatira kuchikafu chubhu inodonha uye inosvinwa kunze kweiyo tube chubhu pasi pechiito chekumanikidza kwakashata. Panguva imwecheteyo, sirinji inoshandiswa kupinza mvura inodziya mutubu rekudya kuti ubudise pombi, ichidzokororwa kanoverengeka kudzamara isina kuvharwa. Iyi nzira inoshandiswa zvakanyanya pakiriniki, nekuti nasogastric tube inoiswa isina kudzika uye chikamu chakafumurwa chakareba, saka chinonyanya kukodzera. Nekudaro, iro-remukati chubhu inoiswa yakadzika mukati memuviri uye chikamu chakafumurwa chipfupi, zvichiita kuti zviome kuita nzira yekukwiza.
(2) Nhungamiro tambo yekucheresa nzira: Isa tambo inotungamirwa mukati memwenje wechubhu yekudya, uye shandisa simba remuchina kudzikisira iro rakavharwa chikafu chubhu. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kune varwere vane yakareba catheterization nguva, simba rakawandisa rinogona kupinda mukati mehutano chubhu, zvichikonzera chikafu chinogadzirisa mhinduro uye kunyange kukuvadza kune yekugaya turakiti.
Iyo nzira yemakemikari inoshandisa mishonga kuputsa kuvhara. Mishonga inowanzo shandiswa inosanganisira enzyme yekugaya uye sodium bicarbonate solution.
(1) Nyungudutsa ma enzymes ekugaya mumvura inodziya uye baya jekiseni rakavharika rechiputi pasi pekumanikidzwa nesirinji ine dhayamita diki ye10ml kana zvishoma. Ma enzymes ekugaya anonyanya kushandisa chiito chekugaya chema enzymes kugaya chikafu chakavharirwa mutubhu rezvemuviri kuita mamorekuru madiki kuti avhure iyo chubhu yezvinovaka muviri. 5% sodium bicarbonate solution ndeye alkaline solution, uye izvo zvikuru zvinoumba mhinduro yekudya zvinovaka muviri ndeye maltodextrin, kasini, mafuta emiriwo, zvicherwa, lecithin, mavitamini uye zvisaririra zvinhu, zvichiratidza kushaya simba kweasidhi, 5% sodium bicarbonate Mhinduro yacho inogona kudzikamisa imwe acidic zvinhu uye nekunyungudutsa zvigadzirwa senge lecithin. Mune zvinyorwa mune zvinyorwa zvekuti kunaya kunokonzerwa nemishonga kunogona kugadziridzwa nevanopikisa (sodium bicarbonate, hydrochloric acid) kudzoreredza kunaya kune yakanyungudika nyika. Chidzidzo ichi chakawana kuti iyo yakavharwa zvachose chubhu yemutumbu yakasvinwa ne5% sodium bicarbonate solution. Maminetsi gumi anogona kusunungura chigadziriso chemuviri chinovhara mutubumbu rine hurefu hwemasendimita maviri kusvika maviri, uye maminetsi makumi maviri anogona kusunungura chinovhara chemvura chinovaka muchubhu yezvinovaka nehurefu hwe4-5 cm. Nekudaro, panenge pasina chinoburitswa kana chayanikwa kumvura inodziya pa50°C kwemaminitsi makumi maviri. Kukamurwa kweiyi nzira ndeyekuti kuwanda kwekuvhara kwechubhu yezvikafu mumakiriniki maitiro kunoitika kumagumo ekupedzisira, saka zvinonetsa kusvika kune jekiseni mushonga wemvura.
(2) Sezvo sodium bicarbonate solution iine kumwe kuparara kwehutachiona mhinduro clot uye drug crystallization, dhipatimendi redu rinosarudza sodium bicarbonate solution semushonga wekubvisa yakavharika zvinovaka chubhu. Kune mashoma akavharirwa machubhu ezvekudya, sodium bicarbonate solution inoshandiswa yakananga kuti isavharwe, uye yakavharika zvachose machubhu ezvekushandisa anoshandisa intravenous extension machubhu. Intravenous yekuwedzera machubhu anowanzo shandiswa kiriniki kujowa zvinodhaka mumapombi anodzivirira. Izvo zvinhu zvakapfava uye zvine mwero weukukutu. Izvo zviri nyore kupinza mukati mehutano chubhu pasina njodzi yekukuvadza iyo chubhu yehutano. Mushure mekucheka firita yemushonga yemvura, kureba i128cm uye dhayamita yekunze iri 2.1mm. Inogona kushandiswa mumamodeli uye kutsanangurwa kweBaitong chikafu machubhu anowanzo shandiswa mune undergraduates. Mushure mekunge iyo venous yekuwedzera chubhu yasvika panzvimbo yakavharidzirwa, jekiseni mvura inodziya kubva kune yekuwedzera chubhu kuti ubudise lumen kubva mukati kuenda kunze, izvo zvinogona kudzivirira iro kugwamba kuti risadonhe pamadziro kana uchikwesha kubva kunze kuenda mukati nekuwedzera njodzi yehutano chubhu kuvharika. Zvakare, sezvo mushonga wacho uchigona kushanda pachikamu chakavharika, nguva inodiwa yekunyungudika kuvharika ipfupiswa. Kushandiswa kwemakiriniki kunoratidza kuti kusangana kweyakavharika chubhu yekuwedzera uye sodium bicarbonate solution kunopfupisa nguva inodiwa yekunyungudza kuvhara, uye ine kuchengetedzeka kwepamusoro uye nemhedzisiro. Mukushandisa kwemakiriniki, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kune: nekuti iyo sodium bicarbonate solution ndeye alkaline, iyo mari yakaiswa mukati medumbu rekugaya haifanire kunge yakawandisa. Kamwe iyo chubhu yezvikafu painodzoreredzwa, inogona kusukwa nemvura inodziya kakawanda kudzora zvachose iyo yakasara chubhu madziro. chinangwa. Kana huwandu hwekutsvaira hwakura, teerera kune acid-base chiyero chemurwere, uye panguva imwechete cherekedza kuti murwere ane dumbu dumbu uye kusagadzikana kwemudumbu.
Chikafu chemukati hachigone kupa chete chikafu chinodiwa kuvarwere uye vanorwara zvakanyanya mushure mekuvhiyiwa matumbo ekuvhiya, asi zvakare shandisa iyo enteric nerve-endocrine system, inosimudzira matumbo peristalsis uye mucosal kukura, chengetedza immune yemuno uye sero mashandiro ematumbo madziro , nekudaro kuchengetedza immune yemuviri. Kudya kwemukati inzira yakakosha yekurapa. Kudzivirira uye kupindira iko kuvharika kweiyo hutano chubhu ndiko kukoshesa kwekutanga kwebasa redu rekuyamwisa. Mubasa remakiriniki rekurapa, isu tinofanirwa kutarisa kune izvo zvinokonzeresa chubhu kuvharika, uye kuitisa zvakanangwa, kuitira kuti tikwanise kudzikamisa kuitika kwezvinetso zvevarwere, kugadzirisa kushomeka kwezvokudya zvinovaka muviri, uye nekuvandudza kushanda kwemakiriniki.
Nezve zvinhu - zvinhu zvedu zvisina DEHP
1.Plasticizer DEHP haina kubatana neiyo PVC mamorekuru mamiriro nekubatana kwemakemikari, uye zviri nyore kudzika kubva pane izvo zvinhu kupinda mumvura kana zvasangana nemvura kana mafuta-akanyungudika mvura.
2.DEHP ine njodzi dzinogona kuitika senge carcinogenicity uye kubereka huturu. Nyika zhinji pasi rose dzakarambidza kushandiswa kweDEHP muzvigadzirwa zvekurapa.
3.Iyo inoraswa Enteral kudyisa seti inoshandisa nyowani plasticizer, iyo ine kushomeka kwemvura uye isingazoungane mumuviri. Inosangana neyechiremba giredhi chigadzirwa zviyero uye inokodzera enteral chikafu varwere.
Bhegi giravhiti yakaiswa
Bhegi pombi yakaiswa
Spike giravhiti yakaiswa
Spike pombi yakatarwa
Chigadzirwa chemuvara mutsauko
Ruvara rweanoraswa Enteral kudyisa seti yepepuru / bhuruu. Iyo yepepuru / yebhuruu chubhu iri pachena zvakasiyana neiyo inopinza infusion chubhu yekudzivirira njodzi dzakavanzika dzekurapa kwekushandisa zvisirizvo kwegadziriro yemukati mutsinga.
Yakadzama dhizaini yekugona
Teerera kune ese mativi ekushandiswa kwechipatara
Mhepo inotungamira tsono inoenderana, yakasimba kuenderana, nekukurumidza kubatana nemhando dzakasiyana dzemvura kugadzirira, hapana chikonzero chekushandisa mweya inotungamira tsono, gomba rinotungamira mweya rakabatanidzwa nemhepo firita kudzivirira zvinobudirira kusvibiswa kwemhepo 3-2. Kureba kwetopu yepamusoro kwakakamurwa kuita mhando mbiri: 95 cm uye 75cm, ayo akakodzera mudenga njanji mhando uye yepasi mhando infusion mira zvichiteerana 3-3. Iyo yepasi chubhu yakashongedzerwa neyepasi rose chiyero-nzira nhatu (Y-mhando) chinongedzo, icho chinobatsira kune dosing kana kufasha iyo chubhu 3-4. Iyo yakajairwa saizi trapezoidal yekudyisa chubhu yekubatanidza inogona kutsauka, yakakodzera kubatanidza akasiyana ekupa machubhu eakasiyana madimitha.
Pashure: Hemodialysis yeropa chubhu
Kuenderera Mberi Kudyisa
Enteral Dhirivhari Sets
Kupinda Kudya Feeding Administration Set
Kwekunze Kudya Bhegi
Kwekunze Kudya Bhegi YeGiravhiti
Kwekunze Kudyisa Mabhegi
Kwomukati Kudya Gravity Bhegi
Kwomukati Kudyisa Giravhiti Set
Kupinda Kudyisa Gravity Tube
Enteral Kudya Pump
Kwekunze Kudyisa Pump Bhegi
Enteral Kudya Pump Pump
Enteral Kudya Set
Kupinda Kwenharaunda KuisaFeeding Tube Pump
Enteral Kudyisa Sets
Enteral Kudya Spike
Enteral Kudya Tube
Enteral Kudya Bhegi
Pamwe Nutrition Pump
Kudyisa Pombi Bhegi
Kudyisa Pombi YeG Tube
Kudyisa Pump Seti
Kudyisa Tube Pump Mhando
G Tube Kudyisa Vakuru
G Tube Giravhiti Kudya
Giravhiti Kupinda Kudya
Giravhiti Kudya Feet
Giravhiti Kudya Tube
Giravhiti Tube Kudya
Kupinda Kwekunze Kwekupinda
Makuru Bore Gravity Kudya Mabhegi
Ng Kudya Pump
Nutrition Tube Kudya
Chinangwa cheNasogastric Tube Kudya
Silicone Kudyisa Tube
Tube Kudya NeGravity